လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး(စွမ်းအင်) ဒေါက်တာထွန်းနိုင် Istech Energy EP-5 Pte.Ltd. မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၈ ) ရက်
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး(စွမ်းအင်) ဒေါက်တာထွန်းနိုင် သည် Istech Energy EP-5 Pte.Ltd. မှ Director ဖြစ်သူ Mr. Nataraj Chandrasekaran နှင့် Country Manager ဖြစ်သူ Mr. P. Siva Shanmugam တို့ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့၊ ၀၉:၀၀ နာရီအချိန်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် Istech Energy EP5 Pte. Ltd. သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်းပိုင်း လုပ်ကွက် EP-5 တွင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် ခွဲဝေ ခံစားရေးစာချုပ်အရ 2D Seismic တိုင်းတာခြင်း၊ Well Planning နှင့် Tendering & Procurement လုပ်ငန်းများ၊ ရှာဖွေရေးတွင်း ရွှေအင်ပင်-၁ နှင့် ရွှေထူးကြီး-၁ တို့ကို တူးဖော်၍ Post Well Analysis လုပ်ငန်းများနှင့် CSR လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေ၊ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထွက်ရှိနိုင်သောပမာဏ၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်၊ ဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ အသုံးပြုမည့်နည်းပညာနှင့် Training အစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းတို့မှ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ၊ Istech Energy EP-5 Pte.Ltd. မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။